Iyo yekutanga yeUnix uye Basa reBell Labs | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yekutanga yeUnix uye basa reBell Labs
Kunyangwe Linux isiri Unix, kuvandudzwa kwayo kwakakurudzirwa zvakanyanya nayo. Zvakafanana naHurd, chirongwa icho Stallman akatanga kugadzira zvigadzirwa zveGNU. Saka tinogona kutaura izvozvo yemahara software sekuziva kwedu ingadai isina kuvapo pasina Unix, uye Unix ingadai isina kuvapo pasina Bell Labs.
Daniel coyle mutori wenhau akaongorora nekunyora mabhuku maviri nezvenyaya yekugadzirwa kwetarenda. Anokurukura pfungwa yetarenda yekuzvarwa, yemunhu uyo ​​pasina kwaari ane hunyanzvi hwaanogona. KwaCoyle, kutaridzika kwetarenda mhedzisiro yezvinhu zvakateedzana zvinosanganisira kuburitswa mukukurudzira kuti ukudziridze. Izvi zvinokurudzira zvinogadzirwa panguva uye mune imwe nzvimbo yenzvimbo.
Sekureva kwaCoyle, geniuses haina kugoverwa zvakaenzana panguva nenzvimbo. Dzinomuka pane dzimwe nguva nenzvimbo munzvimbo dzinogutsa vanhu vanouya pamwechete kuti vadzidze kubva kune mumwe nemumwe uye avo vanoziva zvakanyanya kudzidza, kuita uye kuyedza.
Pakati peboka revanhu vatanhatu vakanyora maprotocol ekutanga ekutaurirana kwenetwork, vatatu vakabva kuchikoro chimwe chesekondari. Iko shanduko yemakomputa yemaXNUMX yaive neine epicenter muSilicon Valley. Linux uye yemahara software yakawana nzvimbo yavo pawebhu, ichiita madaro asisiri chipingamupinyi.
Nei ndiri kunyora nezve izvi pachinzvimbo chedzidziso yekuti ungabira sei mugadziri wekofi kubva kuchiteshi?
Nokuti kiyi yekubudirira budiriro kuvapo kwenzanga umo kutaurirana kwakasununguka uye kwakasununguka kunobvumidzwa pakati pevatori vechikamu. Uye, nhasi chatinacho inharaunda umo hudzvanyiriri hwechokwadi hwezvematongerwo enyika, hunhu uye zvido zvehupfumi zvakakosha kupfuura hurukuro yemahara iyo yakaratidza kwakatangira yemahara software kufamba.
Ini ndinodzokera kune chirevo chekutanga. Linux neGNU zvaisazogoneka pasina Unix uye Unix zvaisazogoneka pasina yakavhurika hunyanzvi tsika yeBell Labs.
Iyo yekutanga yeUnix. Basa reBell Labs
Kune mazhinji ezana ramakore rechimakumi maviri, Bell Labs aive pakati pemasangano ane hunyanzvi munyika. Yakagadzirwa kutsigira yekutsvagisa nekusimudzira kuyedza kweiyo yaingova monopolistic runhare kambani munyika, American Telefoni & Telegraph (AT&T), izvo zvigadzirwa zvaro izvo zvaive zvisina hukama nebhizinesi rekambani yemubereki zvakatamisirwa zvishoma kana pasina mutengo kumakambani .uye masangano anogona kutora mukana wavo.
Apo maAlexander Graham Bell patent akapera muna 1890, mamwe makambani akapinda mubhizinesi, AT & T yakanga isiri fan yeiyo yemahara musika. Haana kungoenda kumatare chete asiwo kukanganisa vaikwikwidza.
Pese pazvinogoneka, yaiwana kubva kune vanopa zvekushandisa pamwe nekuramba kutakura nhare dzakagadzirwa nemamwe makambani pamitsetse yaro yakareba
Zvinonzi makambani nehunyanzvi vaifanirwa kuve nenhare mbiri kana nhatu kuti vakwanise kutaura nevatengi vavo vese.
Kwete kuti sevhisi yanga yakanaka chose kana; paive nekukanganiswa, kusanzwika kwemhando yepamusoro, uye hurukuro dzakavhengana. Mumaruwa, vashandisi vaifanira kugovana mutsetse mumwe chete.
Izvi zvaizotanga kuchinja muna 1907 apo Theodore Vail paakatora chigaro chemutungamiri wekambani.. Vail aive atanga kubva pasi achitanga basa rake sewe telegraph opareta.
Mushure mekunyatsoongorora, Yakaona kuti makwikwi ane hukasha aikanganisa kubatsirwa kweindasitiri saka yakasarudza zano rakasiyana. Akasiya nyaya mudare uye akafunga kubatana nemakambani madiki enhare, kuvayamwisa kana vachikwanisa kana kutakura mafoni avo emubhadharo pazvakange zvisingaite.
Mutungamiri mutsva akatenda izvozvo Kubvumidza hurumende yemubatanidzwa kumisikidza mari, mitengo, uye purofiti yekambani yake yaive mutengo unogamuchirwa kuti uve simba rakakura muindasitiri.ay uwane purofiti inonzwisisika.
Rimwe gumbo rezano raive shandura AT & T kuita mutungamiri weindasitiri ane uto revanjinjini vanoshandira kugadzirisa iyo system kwete nhasi chete asi nezveramangwana futi.
Ose mainjiniya aya aigona kushandira chiratidzo cheVail che "One Universal Policy, One System, uye Service."
Munyaya inotevera tichaona chii chingave chishuwo chikuru chemaBarabhoritari eBell, kuiswa kwemasayendisiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo yekutanga yeUnix uye basa reBell Labs
Kuunza masayendisiti uye mainjiniya pamwechete. Iyo yekutanga yeUnix. Chikamu 2